Va Tsvangirai Vanonyora Bhuku reHupenyu Hwavo
Gunyana 28, 2011
Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri we MDC huru, Va Morgan Richard Tsvangirai, vari kutsikisa bhuku ravo rekutanga renhoroondo yehupenyu hwavo.
Bhuku iri, iro rinonzi Morgan Tsvangirai – At The Deep End, richatanga kutengeswa nemusi weMugovera.
Bhuku iri riri kutsikiswa nekambani ye Penguin Books yemu South Africa, iyo ine mahofisi mu America, Canada, Britain, Australia, New Zealand nedzimwe nyika.
VaTsvangirai vakabatsirwa kuunganidza nhoroondo yehupenyu hwavo nevaimbove mutori wenhau ane mukurumbira, Va William Tagwireyi Bango, avo vakava mutauriri waVa Tsvangirai wekutanga, kubva pavakasarudzwa kuva mutungamiri weMDC.
VaBango, avo vane zvitupa zvedzidzo yepamusoro soro zveMasters Degree munyaya dzekutorwa kwenhau kubva ku Cardiff University ku United Kingdom, pamwe Masters Degree in Public Administration kubva ku Harvard University ku America, vanova munhu wekutanga mukuruka nganonyorwa yaVaTsvangirai.
Bhuku iri rinotarisa hupenyu hwaVa Tsvangirai kubva munguva dze Rhodesia, kusvika vava mutungamiri wehurumende yemubatanidzwa.
Mubhuku iri, VaTsvangirai vanotonongora hupenyu hwavo pamwe nehwevanhu vavakasangana navo, izvo zvinoita kuti veruzhinji vave neruzivo rwemafungiro avo pazvinhu zvakawanda.
Va Bango vanoti vakabatsira mukunyora bhuku iri mushure mekugara nguva yakareba vachikurukura naVa Tsvangirai pamusoro pehupenyu hwavo, kutaura nehama dzavo pamwe nekuongorora mapepanhau mazhinji avakanyora makore apfuura.
Hurukuro naVa William Tagwireyi-Bango